Kedu onye nwere ndị na-eso ụzọ Twitter gị? | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 27, 2011 Saturday, December 17, 2016 Douglas Karr
Ihe ndekọ mara mma na New York Times banyere otu Phonedog na-agba onye ọrụ gara aga akwụkwọ iji nweta ohere ịbanye na Twitter ndị na-eso ụzọ na akaụntụ ahụ o guzobere dịka akụkụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi ha.
Site n'ụkpụrụ ọrụ dị ugbu a na mba ahụ, echere m na PhoneDog zuru oke n'ime ikike ha… ọrụ ị na-arụ na oge ụlọ ọrụ bụkarị nwere site na ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, soshal midia nwere gbanwere ma echiche na mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ na netwọk ha. Ọ bụbu na ndị mmadụ nwere ike iguzo n’azụ akara ahụ iji kparịta ụka na netwọkụ. Anyị mụtara site na mgbasa ozi, ụdị, akara, nkwanye okwu na ohere nkwado ndị ọzọ. Nsogbu ya bụ na soshal midia na-etinyezi ndị mmadụ n'ihu ụlọ ọrụ na ozugbo na aka na ika. Nkwenye nke onwe m bụ, n'ihi na mgbasa ozi mmekọrịta na-agbanwe usoro nkwukọrịta, usoro nke onye na-agbanwe agbanwe.
Hindsight bụ mgbe 20/20, mana ọ dị mfe amụma mgbasa ozi ga-eme ka nke a guzo n'ihu. Ọ bụ ezie na Phonedog nwere ike imeri agha iwu ma ha nwere ma ọ bụ na ha enweghị ụzọ, eziokwu ahụ bụ na ha etinyeghị atụmanya a na amụma mgbasa ozi bụ ihie ụzọ. N'uche nke m, ekwenyere m n'eziokwu na ikpe ha enweghị isi na nke a. Ekwenyere m na ọ bụ ọrụ dịịrị nke ụlọ ọrụ ịtọsi anya na ọrụ na inwe.
Ebe ọ bụ na ọ nweghị onye nwere bọl anwansi, ịkwesịrị iche banyere nke a na ndị ọrụ gị ma setịpụ atụmanya kwesịrị ekwesị:
Ọ bụrụ n'ịchọghị ndị ọrụ gị nke ndị na-eso ụzọ ha, ị nwere ike ịme ka ha jikwaa ma kpọsaa akaụntụ ụlọ ọrụ na-akwado. Ihe Nlereanya: Kama ịnwe ka ndị ọrụ anyị jikwaa akaụntụ ha, anyị na-enye ha ohere ịbanye @dknewmedia na Hootsuite na echekwa. Achọpụtala m na ụfọdụ ndị mmadụ ga-enwe ike ịbụ aha ụlọ ọrụ, ebe ezigbo aha ha dị na akaụntụ ahụ bụ ndị ọrụ. Ekwenyere m na nke ahụ na-eme ka atụmanya ya na ndị na-ege ntị na ụlọ ọrụ nwere akaụntụ ahụ.
Achọpụtala m ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ndị ọrụ ha debanyere Twitter na njikwa na aha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m chọrọ ka onye ọrụ ọ bụla nwee akaụntụ ụlọ ọrụ corporate M nwere ike ịtọ @dk_doug, @dk_jenn, @dk_stephen, wdg. Echeghị m na nke a dị oke njọ, mana m ga-asị ịhụ otu dị ukwuu na akaụntụ na-emecha hapụ!
Nhọrọ ikpeazụ, n’uche m, bụ nke kachasị mma. Kwe ka ndị ọrụ gị rụọ ụlọ ọrụ ha ma debe ha. Amaara m na ọ na-eju gị anya na nke a, mana inye ndị ọrụ gị ikike ịga nke ọma dị ike. M hụrụ eziokwu ahụ n'anya Jenn na Stephen ha abụọ na-ekwukarị banyere ya DK New Media na akaụntụ ha. Ọ bụrụ na ha ewulite ihe dị egwu na-eso, m na-ele ya anya dị ka elele nke itinye ha n'ọrụ na anyị yana uru ọzọ ha na-eweta na ụlọ ọrụ m. Ọ bụkwa ọrụ m iji hụ na ha nwere obi ụtọ na m nwere ike idebe ha ebe a!
Ndị mmadụ na-amalite site na ndị mmadụ, ọ bụghị ụlọ ọrụ. Ndị na-eso ụzọ ahụ abụghị ụmụazụ Phonedog… ha nwere ekele maka ọdịnaya ejiri mepụta nke ahụ Noa Kravitz nwere ike ịzụlite n'aha Phonedog. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ na Phonedog kwụrụ Noa ụgwọ, ọ bụ ndị na-eso ụzọ Noa ka nwere onyinye.
Okwu ikpeazu m na nke a: Akpọrọ m okwu ahụ asị nke na nwe mgbe ọ bịara n'ụlọ ọrụ, ndị ọrụ na ndị ahịa. Ekwetaghị m na ụlọ ọrụ nwere onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ na ha nwere onye ahịa. The ọrụ bụ a ahia… ọrụ maka ego. The ahịa bụkwa a ahia trade ngwaahịa maka ego. Onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa ahụ nwere ikike ịhapụ mgbe niile na oke nkwekọrịta ha. Otu ụlọ ọrụ dị ka Phonedog na-eche ha nke ndị ahụ na-eso ụzọ nwere ike inye ihe akaebe niile dị n'ụwa maka ihe mere ha ji eso Noa ma ọ bụghị akụkọ Phonedog.
Tags: ọhụrụ york ugboronoah kravitzphonedogsuedTwitterụmụazụ twitter
Usoro Ulo Ozo nke 2011
Dee 29, 2011 na 11: 19 AM
Ọ dị m nwute mana naanị “ndị nwe” ebe a bụ ndị na-eso ụzọ.
Dec 29, 2011 na 12:28 PM
Kpamkpam kwenyere gị, Jeff!